Kulankii Culumada iyo Dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda. - Anti Tribalism Movement : The ATM
Maalinimadii Arbacada 19ka August 2015ka ayaa waxaa magaalada London ee xarunta wadanka UK lagu qabtay kulan ay soo qaban-qaabiyeen dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda (Anti – Tribalism Movement).
Kulanka ayaa waxaa si gaar ah marti ugu ahaa qaar ka mid ah culumada Soomaaliyeed ee gacanta ku haya Xarumaha iyo Misaajidada ku yaala magaalada London. Waxaana kulanka lagaga hadlay arrima dhowr ah oo ay ka mid tahay Qabyaaladdu. Waxaana qodobadii laga hadlay ka mid ahaa:
Wadashaqeyn dhex-marta Misaajidada iyo dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda.
Kaalinta ay Misaajidadu ka qaadan karaan dagaalka ka dhanka ah Qabyaaladda.
Kaalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ka qaadan karaan ka hortaga Qabyaaladda.
Kulanka ayaa ahaa mid si gaar ah xooga loogu saaray in la helo fikrado kala duwan oo la xiriira sida ugu wanaagsan ee wacyi-gallin ku saabsan Qabyaaladda loogu sameyn karo dadka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale la xusay muhiimada ay leedahay in la helo xiriir iyo kulamo joogta ah oo looga hadlo dhibaatooyinka guud ahaan saameynta ku leh bulshada.
Ka qeyb galayaasha kulanka ayaa isku raacay in xalka ugu wanaagsan ee lagaga hortagi karo dhibaatada Qabyaaladda ay tahay barashada diinta Islaamka. Qaar ka mid ah Culumada ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadka la fahansiiyo micnaha farqiga u dhaxeeya Qabiil IYO Qabyaalad, iyada oo loo marayo diinta Islaamka.
Dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda iyo Culumada ayaa isla gartay in warbaahintu tahay halbowlaha isku xira bulshada, ayna saldhig u noqon karto ama lagu gudbin karo fariimaha iyo barnaamijyada wacyi-gallinta ah si codkeenu u gaaro guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel waliba oo ay joogaan.
Waxaa la xusay in Qabyaaladdu ay gashay siyaasadda, guurka, ganacsiga, warbaahinta, fanka iyo suugaanta, isboortiga, iyo misaajidada. Dhallinyarada iyo Culumada ayaa balan qaaday inay kaalin weyn ka qaadan doonaan baraarujinta bulshada.
Ugu danbeyntii waxaa meel la isla dhigay in xooga la saaro sidii loo heli lahaa dhammaan maamulayaasha Xarumaha iyo Misaajidada kale ee ay gacanta ku hayaan Culumada Soomaaliyeed ee ku yaala magaalada London iyo guud ahaanba wadanka UK.